Barcelona Oo Sare U Qaadeysa Baacsiga Ay Ugu Jirto Andreas Christensen
HomeWararka CiyaarahaBarcelona oo sare u qaadeysa baacsiga ay ugu jirto Andreas Christensen
January 7, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Barcelona ayaa lagu soo waramayaa inay dardargelisay dadaalkeeda ku aadan saxiixa daafaca Chelsea Andreas Christensen .
Isagoo ku guuldareystay inuu heshiis cusub u saxiixo Stamford Bridge, daafaca dhexe ayaa xor u ah inuu la hadlo kooxo ajnabi ah ka hor inta uusan u dhaqaaqin suuqa xagaaga.
Markii wax laga waydiiyay arrinta shirar jaraa’id, maamulaha Chelsea Thomas Tuchel ayaa qiray inuu aad u jecel yahay xiddiga heerka caalami ee dalka Denmark inuu mustaqbalkiisa u hibeeyo Blues sida ugu dhaqsaha badan.
Si kastaba ha ahaatee, sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya Spain , Barcelona ayaa sameyneysa wax walba oo ay ku dhameystiri karto heshiis horudhac ah oo ay la gasho Christensen maalmaha iyo toddobaadyada soo socda.
Christensen ayaa wadar ahaan ku soo bilowday 16 kulan iyo saddex kulan oo badal ah tartamada oo dhan xilli ciyaareedkan isaga oo wali fure u ah qorshaha Tuchel.